Matongerwo eNyika, 30 Gumiguru 2017
Muvhuro 30 Gumiguru 2017
ZEC Yoramba Ichishorwa Muchirongwa cheBVR
Chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chakapinda muchikamu chechipiri nezuro sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo richipomerwa mhosva yekusarongeka zvakanaka mukufambiswa kwechirongwa ichi.
Chirwere cheTyphoid Chodzikira muMbare
Bazi rezveutano muHarare City Council rinoti huwandu hwevanhu vari muchipatara nekuda kwechirwere cheTyphoid huri kudzikira panguva iyo kanzuru iri kuenderera mberi ichiongorora kutapuriranwa kwechirwere ichi.
Nhengo dze MDC-T Nhatu Dzomiswa Pamberi peDare kuChitungwiza
VaKaliati, avo vava kurapwa vari pamba pavo, vanoti vave kunzwa zvirinani uye vanoda kukurumidza kunaya kuti vanoita basa rebato ravo semazuva ese.
Masvingo Inoti VaChadzamira Vachiri paBasa
Mutauriri weZanu-PF mudunhu reMasvingo, VaRonald Ndava, vanoti sachigaro wedunhu iri, VaEzra Chadzamira, avo vanonzi vakambomiswa basa nenyaya yekuita zverusarura rwemarudzi nekukonzera kusagadzikana mubato, vachiri pabasa nekuti havana kusumwa zviri pamutemo.
Vashandi veZEC Votarisira Kupihwa Mvumo yeKutoresa Vanhu Mhiko
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika, VaObert Mpofu, vatenda kuti vachapa vashandi veZimbabwe Electoral Commission, ZEC, mvumo yekuti vatorese mhiko kuvanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota pakati pevhiki rino.
Vanopikisa Voshora Madzishe Anoti Achatsigira VaMugabe Gore Rinouya
Asi mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party, VaJacob Mafume, vanoti madzishe ari kutyora bumbiro remitemo nekutsigira VaMgabe, pachinzvimbo chekuti vatokurudzira kuti munyika muve nemapato akawanda ezvematongerwo enyika.
Gumiguru 27, 2017
Bhanga reCBZ Rinofaindiswa $385m neAmerica
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio7 kuti Zimbabwe haingaudze America zvekuita maererano nekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
ZEC Yopa Vechidiki veZanu-PF Mabasa?
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West, VaAustin Ndlovu, vanoti vakapinza basa vanhu vakabva mumapazi ehurumende kusanganisira bazi revechidiki sevashandi vehurumende kwete senhengo dzemapato.
Kutenga Zvinhu neBitcoin Kwofarirwa muZimbabwe
Kushomeka kwemari munyika nekushaikwa kwemari yekunze kwava kupa kuti vamwe vanhu vatsvake nzira dzinoita kuti varerukirwe kutenga mari padandemutande vachishandisa hunyanzvi hwechizvino zvino mukutenga zvinhu kunze kwenyika.
VaTsvangirai Vanoenda kuSouth Africa Zvasiya Vanhu Vaine Maonero Akasiyana
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vanonzi vadzokera zvakare kuSouth Africa zvechimbi chimbi nekuti havasi kunzwa zvakanaka.
VaMapondera Votaura Pamusoro peBitcoin
VaChristopher Mapondera, vakabatana nechimwe chizvarwa chemu America, VaSinclair Skinner, muna 2015 mukuumba kambani yeBitMari, iyo inoshandisa hunyanzvi mukutumira mari kunyika dzakasiyanasiyana.
Gumiguru 26, 2017
Hurumende Yopa Madzishe Zvikakarara zveMotokari
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, Va Enerst Muzengi, vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kuda kuti iwane rutsigiro rwemadzishe musarudzo dzegore rinouya.